Sintomy ary apetraho ny Play Store 4.0.25 | Androidsis
Ao amin'ny horonantsary manaraka Ampianariko izy ireo hampidina sy hametraka ny kinova vaovao ao amin'ny magazay fampiharana an'ny Android, ny play store 4.0.25 manan-kery ho an'ireo fitaovana mihazakazaka kinova mitovy na lehibe kokoa noho Froyo o Android 2.2.
Ao amin'ny horonantsary azonao jerena Ahoana no hametrahako azy ao a LG Optimus 3D mihazakazaka Android 4.0.4 Sandwich gilasy, ary lavitra ny vinavinany tamin'ny voalohany, toa tsy dia mavesatra amiko ilay fampiharana ary miaraka amina fanavaozana sy endriny nohavaozina tanteraka izay mahatonga ny fampiasana azy sy ny fitetezana azy amin'ireo sokajy samihafa mahafinaritra kokoa.
Tadidio fa raha hametraka ny play store 4.0.25, tsy maintsy ampiasaintsika ny boaty fanamarinana hanaiky ny fametrahana fampiharana avy fiaviany tsy fantatra, Ity safidy ity dia hita amin'ny toerana samihafa arakaraka ny kinova Android ampiasainay.
En Froyo o Gingerbread ho hitantsika izany ao Fikirana / fampiharana, raha amin'ny kinova Android kokoa dia ahitantsika azy io Fikirana / fiarovana.
Vantany vao voamarina ny boaty ary alaina ny rindranasa amin'ny fahatsiarovana anatiny ny fitaovantsika, tsy hiditra amin'ny làlana izay nitehirizantsika azy akory isika File Browser ary kitiho eo aminy mba hanatanterahana azy.
Hanana hafatra milaza isika fa hanolo ny rindranasan'ny rafitra izay tokony hamaliantsika izay ekentsika sy ny fametrahana ny kinova vaovao an'ny play store 4.0.25.
Araka ny hitanao amin'ny horonan-tsary mifamatotra, ny fampiharana dia miasa tanteraka ary tsy manana karazana bibikely na tsy fahombiazan'ny asa, inona koa, ao amin'ilay horonan-tsary mihitsy dia nametraka rindrambaiko izahay mba hahitanao ny mifanentana tanteraka aminy.
Izaho manokana dia tiako ity kinova vaovao ity traikefa nahafinaritra samy ny hakingana miteny y fampisehoana toy ny amin'ny lafiny fandaminana sy fitadiavana rindranasa, lalao, sarimihetsika, mozika na boky.
Raha te hahalala antsipiriany misimisy momba an'ity kinova vaovao ity ianao dia afaka mamaky ny lahatsoratra manaraka navoaka ora vitsivitsy lasa izay tao amin'ny Androidsis.
Fanazavana fanampiny - Ahoana ny fomba hampitomboana ny hafainganam-pandehan'ny fikirakirantsika, Ahoana ny fanatsarana ny fahatsiarovana RAM amin'ny fitaovana Android, Google Play dia nohavaozina amin'ny interface vaovao
Ampidino - play store 4.0.25
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fampidinana sy fametrahana ny tsimbadika vaovao an'ny Play Store 4.0.25
andresblanco dia hoy izy:
miasa ho an'ny samsung galaxy S
Mamaly an'i andresblanco
Izaho dia efa nametraka azy tao amin'ny Samsung galaxy S misy ahy tsy misy olana tonga lafatra
Jose Ibáñez dia hoy izy:
andao apetraka izy io hahitanao ny fandehany. Misaotra tamin'ny fampahalalana. 😀
Valiny tamin'i José Ibáñez
Mety ho an'ny modely rehetra lehibe kokoa na mitovy amin'ny Froyo Android 2.2 +
Manana olana amin'ny findaiko aho, nesoriko ny toeram-pivarotako satria nanana olana aho ary tsy haiko ny mamerina azy io. Azafady mba mila valiny aho.
Francis Cruz Badilla dia hoy izy:
Moa ve tsy halefa ny kinova ofisialy na fomba fisintomana iray hafa ankoatry ny tranokala ivelan'ny google play?
Mazava ho azy, Google dia hanavao izany amin'ny fomba ofisialy tsy ho ela.
Tamin'ny 12/04/2013 00:59 PM, «Disqus» nanoratra:
Salama Francisco, fantatrao fa manana fanilo blackberry celilau 9800 aho ary tsy afaka misintona na inona na inona amin'ny app app! Miseho amin'ny teny anglisy daholo ny zava-drehetra ary te-misintona ny play store aho ary tsy afaka, te-hahalala ny fomba hanaovana azy aho! trano fivarotana tiako ny fomba fiasa satria afaka misintona amin'ny Espaniôla aho !!!
tratra dia hoy izy:
Nametraka azy tamin'ny xperia aho ary tsy mandeha intsony izao. Ary rehefa esorina io dia tsy miverina amin'ilay teo aloha intsony, tsy manana magazay aho. Tsy maintsy hamolavola ny telefaona ...
Mamaly an'i trax
Marisela bael dia hoy izy:
Aiza no omenao ahy ny safidy na ny rohy fampidinana?
Valiny tamin'i Marisela Bael
Paolo manenjika an'i grandez dia hoy izy:
ary aiza no azafady
Valiny tamin'i Paolo Chase Grandez
jhonatansiles65 dia hoy izy:
Ola manana xperia s ics aho ary manamarina ilay boaty fiaviany tsy fantatra tsy hosokafako dia tsy avelako hanindry ny bokotra installer izay afaka canselar izay mety hisy?
Olona voninkazo Delgado dia hoy izy:
Salama, manana ny asus tf300t aho ary ny ahy dia nohavaozina irery, ary tsy nanondro na namela firaketana mitovy amin'ny fanavaozana mahazatra ary inona no ataoko ao amin'ny 4.0.27, azoko an-tsaina izany 27 noho ny takelaka ... misaotra ho an'ny vaovao
Valiny ho an'i Person Florido Delgado
Ilay saka adaladala dia hoy izy:
Milaza amiko fa tsy misy fampiharana izay afaka mahavita an'io ASA io, azafady mba ampio aho fa ny findaiko dia SAMSUNG GALAXY S3
Mamaly an'i Crazy Cat
osmin dia hoy izy:
Aiza no ampiakarako azy, tsy miseho ny safidy fisintomana?
Mamaly an'i osmin
Izaho dia manana ny Play Store napetraka saingy tsy afaka miditra amin'ireo rindranasa aho satria mivoaka tsy misy fifandraisana Internet ary manana lalao napetraka ihany koa aho ary tsy mandeha io satria milaza fa tsy manana fidirana amin'ny google aho, tsy manao izany. tena fantatrao izay nitranga
Ry namako manana an'ity olana ity aho, manandrana manokatra ny fivarotana kilalao ao amin'ny Huawei aho ary misokatra izany ary tsy maharitra segondra sy mikatona, afaka manampy ahy ve ianao?
aiza no alaina dia te-hisintona azy aho
Yoan guichon dia hoy izy:
miasa ho an'ny sansun gaaxy s3 clone
Valiny tamin'i Yoan Guichon
ronal dia hoy izy:
Ahoana no fomba fisintomako ilay trano fivarotana amin'ny findaiko?
Mamaly an'i ronal
Aiza no ampiakarako azy, azafady mba ampio aho
Misaotra amin'ny fanampiana !! 🙂
Jeylin Zamora M. dia hoy izy:
Tsy misintona ny fivarotana akory aho ary mampiditra ny fampiharana ny finday ary mivoaka vetivety
Valiny tamin'i Jeylin Zamora M
K onja raha afaka manokatra fivarotana volafotsy aho
Mamaly an'i monse
Aiza no ahafahako misintona ny rindranasa blackmart?
Google Play dia nohavaozina amin'ny interface vaovao